म इन्जिनियर होइन – ✍️ शब्द संसार
✍️ शब्द संसार
July 10, 2017 Katha
Posted by Prakash Gautam
भोलिपल्ट गर्हुगोँ पाहिलासाथ बोझिलो मन र एकचिम्टी आश लिएर पुल्चोक क्याम्पसको प्राङगणमा पुगेँ । वरिपरी आफुभन्दा दुई तीन ब्याच जुनियर भाईबहिनिहरु भेटिए । आफ्नै पालाका साथीहरु त धेरै कम थिए, एउटालाई टिप्न भ्याएँ अनी लुसुक्क अलिकती माथि सेर्पा दिदिको चिया पसलमा गएँ । त्यहाँ हामी दुईले एकछिन छलफल गर्यौ । साथीहरुको चर्चा भयो । उसले भन्यो: भुवन त अहिले NCELL को सिनियर ईन्जिनियर रे नि । सजला केईसीको HOD भैरे नि । बाँकी साथीहरु पनि खासै कोही नेपालमा छैनन । दिपेश पनि लेनोवोको सर्किट डिजाईनर भयो रे नि । जे होस प्राय केटाहरुले राम्रा राम्रा काम पाएछन यार । हामी मुला चाँही यही सड्ने भयौँ । तँलाई थाहा छ; अब चार चोटि भन्दा बढी त ईक्जाम दिन पनि पाईन्न रे नि । उसले अनुहार बिगार्दै धुवाँमा आफ्नो मलिन अनुहार छोपेर बस यती भन्यो । मलाई भने अनेकौं बिकिरणहरुले एक्कासी छोपेझैँ भएर आयो । “वास्तबमा एउटै पेपरको इक्जाम धेरै चोटि ह्यान्डल गरेपछी कन्फिडेन्स भन्ने कुरो मजाले मर्दोरैछ है” मैले समर्थन पाउने आशमा उसतिर हेर्दै भने । प्रतिउत्तरमा उसले मुन्टो हल्लायो । “तर छाड्दे, एकचोटी त हाम्रो पनि पास हुने दिन आउला नि ! अनी हामी पनि ‘जव’ पाउँछौ कि ?” मैंले परिस्थितीमा बिस्मायाधिबोधक र प्रश्न-चिन्ह एकैचोटी लगाईदिएं । “खै यार, तेरो स्थिती त सुध्रेला कि ! मेरो त उस्तै हो । ” आफुलाई साह्रै निरिह पर्दै उसले यत्ती भन्यो । चुरोट पिउँदै एकदुईवटा नयाँ कोईसनको बारेमा चर्चा गरेर हामी इक्जाम हलतिर लाँग्यौ । हामी पुग्दा इक्जाम सुरु भइसकेको रैछ । कपी लिदैं थिएं । चिनेको एकजना भाईले, म तिर हेरेर मुखमन्डल ज्यादै नमजाले बिगारयो ।
मैले सोचें; साला, यो चोटि पनि लास्टै आँडे पेपर बनाएछ कि क्या हो, फेरी गुल्टेला जस्तो छ । जे होस्, एकचिम्टी आश लिएर मैले आफ्नो सिट समाँते । कोईसन पेपर हेर्दै थिएं; एक नम्बरको त सजिलै लाग्यो । TU को इक्जाममा बिशेषत: इन्जिनिएरिङ्गमा, सबै प्रश्न स्वात्तै पढिहाल्नु हुन्न । होपलेस भइन्छ । पढाई जस्तो होस; पेपर त गजबको बनाउँछ TU ले । मैले पछाडिका प्रश्नहरु त्यतिखेर पढ्दै पढिन । जबर्जस्ती आफ्नो मगजले भ्याएसम्म दुइ’टा प्रश्न गरेर भ्याएं । एक घण्टा बितिसकेछ । मैले टाउको उठाएँ; तुरुन्तै मेरो साथी त कपी बुझाएर मतिर एक फिक्का नजर मिल्काएर निस्कियो । अरु पनि निस्कने तरखर गर्न थाले । एक्कासी कोठामा म’सहित मात्र चारजना भयौं । तिनिहरु धमाधम लेख्दै थिए । म के गरुं मैले सोच्न सकिन । पछडिका बाँकी प्रश्नहरु पढें । चारवटा त मैंले नपढेको च्याप्टरबाट सोधेको रै’छ । अरु पनि सबै कन्सेप्चुअल । एक्कासी टाउको भारी भयो । केही लेख्न मन लागेन । एकैछिनमा सायद इक्जाम सेक्सनको ठुलोबडो भनौंदो आयो । “पर्स, मोबाईल त खल्तिमा छैन नि ?” उसले नयाँ प्रश्न दियो । मैले खल्ती छामे । वास्तवमा मेन्टल प्रेसर बढी भएर होला, प्रथम पटक मैंले मोबाइल र पर्स खल्तिमै राखेर इक्जाम दिन थालएको रै’छु । त्यसले चाल पाईहाल्यो । सालाका आँखा गिद्दका भन्दा तिखा छन । मैले मनमनै सोचें । उ हान्निदै मेरो छेउ आयो । पर्स, मोबाइल र कपी तिनैथोक खोस्यो । “सामन लिन, एक्जाम पछी डिन कार्यालय आउनु ” बाहिर निस्केपछी मतिर हेरेर ईशाराको भाषामा बस यती भन्यो ।
एक साँझको कुरो हो । म ढिला घर आईपुगें । ब्यागमा CV र ट्रान्सक्रीप्टको कपी थियो । कोठाको एक कुनामा फाल्दिएँ । अनी क्यान्डिल लाईटमा Derek Humphry को “Let me die before I awake” को पन्ना पल्टाउन थालेँ । अक्षरहरु रक्ताम्य देखेँ । Paulo Coelho को “Veronica Decides to Die” को सुरुसुरुको अध्यायको आँफैले रेखाकिंत गरिराखेका केही वाक्य फेरी पढें । मन झन भारी भयो । गोविन्दराज भट्टराईको “सुकरातका पाईलाहरु” पल्टाएँ । आफु नै ‘अनन्त’ जस्तो लाग्यो । “The Bell Jar” झिकें । बस झिकें मात्रै अनी Sylvia Plath लाई मनमनै सोल्युट गरें । जीवन त यही लेखिकाले भोगेकी हो । वास्तविक सत्य सायद महाशुन्य नै हुनसक्छ ।
सिलिङ्तिर हेरें । केही थिएन । लोडसेडिङ्को मध्य समय थियो । मैनबत्ती मलाई उज्यालो दिन आफुलाई खत्तम पार्दै थियो । बाहिर झ्याउँकिरी कराएको प्रष्ट सुनिन्थ्यो । धेरै टाढा एक हुल कुकुरहरु एकनासले भुकिरहेका थिए । म झनझन आफुलाई बोझिलो अनुभब गर्दै थियो । निस्सार त उसै थिएं, झनै निस्सार अनुभुती गर्न थालें । एक्कासी चिच्याउझैँ भएर आयो । छतमा गएं; दुई खिल्ली चुरोट भ्याएँ अनी खै के जोश आयो । ओरिजिनल ट्रान्सक्रिप्ट र क्यारेक्टर सर्टिफिकेट लिएर म चुरोट पिउदैँ घर नजिकैको गल्ली निर गएँ । अनी ति दुवैलाई लाईटरको भारी सहयोग लिएर अन्त्य गरिदिएँ । हेर्दै थिएँ; मेरो सात बर्षको कमाई बिस्तारै खरानी भयो । मनमनै सोचेँ, संसार भौतिक छ, साह्रै भौतिक । आफु सकिएपछी मानिसलाई पनि त जलाइन्छ । कि गाडीन्छ ।
त्यो भनेको जीवन उपयोगहिन भएपछी हामीले लिएको या समयले दिएको अनौठो बिकल्प हो । मरेको बस्तु सजाएर घरमा किन राख्नु , बेकार घर गन्हाउँछ, मन गन्हाउँछ । त्यो प्रमाणपत्रको पनि अब के काम थियो र ? उपयोगहिन थ्यो । जलाएर ठीक गरेँ । त्यो खरानी भएपछी तन मन दुवै हल्का भयो । कसैको बारेमा केही सोचिँन । मलाई भोलिको मतलब छैन । समय जसरी कटोस । समाजले जे भनोस । बाले गाली गरुन या नगरुन, मलाई बाल । तारा हेरेँ । भुईँमा हेरेँ । आफ्नै हत्केलामा थुक्न खोजे तर थुकिनं । फेरी किन हो कुन्नी खिस्स हाँसे । अनी ठुलै स्वरमा चिच्याउँदै घरतिर लाँगे । “अब म इन्जीनियर होइन, म इन्जीनियर होइन, म इन्जीनियर होइन…… ” घरछेउमा पुगेपछी हातको ठुटो चुरोट फल्दिएँ अनी कुल्चदैँ मनमनै सोचेँ: “धन्न, आफुलाई काउन्सिलमा रजिस्टर गरेनछु….. !”
इन्जिनियरईक्जामईलेक्ट्रोनउकुसमुकुसतितो सत्यप्रकाशप्रकाशेका कथाप्रगतिबादबियोगभबिस्यभ्रान्तीलक्षणाशुन्यबादसमयसंसार
π(PI) – २
π(PI) – १
रोवोर्ट र ख्याउटेका कविताहरु
माता, डाटा माईनिङ र स्युडोसाईन्स
एक धुमिल बिहान
Deepak on माता, डाटा माईनिङ र स्युडोसाईन्स
Prakash Gautam on म इन्जिनियर होइन
Jyoticarkey on एक धुमिल बिहान
Prakash Gautam on एक धुमिल बिहान
Deepesh Prakash on म इन्जिनियर होइन
Swo rup on हाइकूहरु-१
Irrational दिमाग अभिधा अलेखक अस्तित्व इतिहास इन्जिनियर ईक्जाम ईलेक्ट्रोन उकुसमुकुस करेन्ट कवि कविता कवी कालो भुईँमा नीला रङहरु गजल जीवन तँ र म तितो सत्य तिमी पाइला पुर्णिमा प्रकाश प्रकाशेका कथा प्रकाशेका कविता प्रकासेका कविता प्रकासेका गजल प्रगतिबाद प्रेम बर्तमान बिज्ञान र कविता बियोग भबिस्य भ्रान्ती म र प्रेम याद रहस्य लक्षणा लक्ष्य व्यन्जना शब्द शुन्यकाल शुन्यबाद संसार समय स्त्रि